UniProyecta - Dzidzo yemazera ese
Mhoro mudiwa muverengi, tinokugamuchira iwe UniProyecta. Pano tinofunga izvozvo dzidzo netsika zvinofanirwa kuve zvemahara kune vese, murume kana mukadzi, mwana kana mukuru. Naizvozvo, pane ino peji iwe unowana iyo ruzivo izvo zvatave tichinyora muchimiro chezvinyorwa kuti zvikubatsire iwe mukurovedza kwako. Kana usina chokwadi chekutsvaga zvauri kutsvaga, isu tinokubatsira nepfupiso yezvauchawana pane ino saiti.
Imwe yesimba redu mutauro wechiFrench, uyo watakadzidza nekuda kwemabhuku uye nzendo dzacho France neCanada. Muchikamu chino tinodzidzisa zvidzidzo zvematanho ese: kubva kune anotanga kusvika kune epamberi.
Nhasi hazvigoneke kusada ruzivo rweChirungu. Mu terevhizheni, social network uye vhidhiyo mitambo iwe unowana zvikamu kana mazwi akatorwa kubva kuChirungu. Naizvozvo, takagadzirira zvinyorwa izvi ku dzidza chirungu uye nekuvandudza yako mwero.
Mavara acho muChirungu
Mazuva evhiki muchirungu
Mavhawero muChirungu: Fonetiki uye Kududzwa
Nomuzvarirwo, havazi vese vari veChirungu kana chiFrench, kune mimwe mizhinji yakanaka uye inobatsira mitauro yekudzidza. ChiRussia, chiChinese, chiJapanese kana chiItaly ingori mimwe mienzaniso yezvatakagadzirira.
Manhamba muBasque kubva 1 kusvika 100
MaJapan manhamba kubva 1 kusvika 50
Isu tava kutendeukira kuchikamu chetsika, kunyanya isu tichaendazve mavambo edu, ekare Girisi. Hapana chinhu chiri nani kunze kwenyaya yakanaka yavanamwari nevarwi kujekesa pfungwa uye kudzidza nemadzitateguru edu.
Nhema dzechiGiriki dzevana
Uye pakupedzisira, muchikamu chino isu tinosanganisira zvese zvisina nzvimbo mune chimwe chikamu chakanyanya.
Minyengetero yemudiwa yaenda
Uye ndizvozvo chete! Tinovimba unonakidzwa nekugara kwako pa UniProyecta Uye rangarira kuti kana iwe uine chero mibvunzo kana matambudziko iwe unogona kutibata nesu uchishandisa fomu rekutaurirana kana muchikamu chemashoko panopera chidzidzo chega chega. Kwazisai, netizen!